Izindaba - Amathiphu wokungachithi uboya kumajezi oboya
Amathiphu wokungachithi uvolo kumajuzi woboya
1. Icebo lokuthi amajezi oboya angagcini izinwele: Chaza isipuni sesitashi engxenyeni yebheseni lamanzi abandayo, cwilisa ijezi loboya bese ulikhipha ungalisontanga, ulikhiphe bese ulifaka emanzini ngesilinganiso esincane sokuwasha powder, cwilisa imizuzu engu-5. inetha.
2. Kuzokwakheka ungqimba oluncane ebhodweni le-aluminium noma ebhodweni le-aluminium ngemuva kwesikhathi esithile. Faka izikhumba zamazambane ngaphakathi, engeza inani elifanele lamanzi, ubilise, ubilise cishe imizuzu eyi-10, bese ususa.
3. Iphansi lekhishi linamafutha amaningi futhi akulula ukuwahlanza. Ngaphambi kokugcoba phansi, ungamanzisa umhlabathi onamafutha ngamanzi ashisayo ukuthambisa amabala, bese uthela uviniga ku-mop, bese uphonsa phansi ukuze ususe ukungcola okunamafutha phansi.
4. Ngemuva kokuvula iswishi yegesi ukuze ibase, uma ilangabi liluhlaza, kusho ukuthi igesi ishile ngokuphelele, okuchitha igesi. Ngalesi sikhathi, kungakuhle ukuthi uguqule i-valve yokulawula umoya uye lapho kuzwakala khona ilangabi.
5. Uma usebenzisa i-heater yamanzi, kungcono ukulungisa izinga lokushisa eliphakathi kwama-50-60 degrees, angavimbela ukwakhiwa kwesikali se-heater yamanzi; lapho izinga lokushisa kwamanzi lidlula ama-degree angama-85, ukwakheka kwesikali kuzokhula.